ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်များ UNICEF က ဖွင့်ထားတဲ့ ကျောင်းတက်ရောက်စဉ် (သြဂုတ်လ ၂၀၁၈) (AP Photo/Altaf Qadri)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ကလေးတွေကို ပညာသင်ကြားခွင့် ပေးတော့မယ့်အကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကလေးတွေ ပညာသင်ခွင့်ရစေလိုကြောင်းလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး A.K. Abdul Momen က AFP သတင်းဌာနကို ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်ထဲ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ARSA ရိုဟင်ဂျာအစွန်းရောက်အဖွဲ့ကို မြန်မာစစ်တပ်က လိုက်လံရှင်းလင်းတဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေအတွင်း အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေထဲမှာ ကလေးငယ် သန်းဝက်လောက် ပါဝင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီး ဒီကလေးငယ်တွေထဲက တသောင်းလောက်ကို စမ်းသပ်အစီအစဉ်အဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးငယ်များရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကဖွင့်လှစ်ပေးမယ့် ကျောင်းတွေမှာ ပညာသင်ကြားပေးသွားမှာပါ။
ရိုဟင်ဂျာကလေးပညာရေး ကူညီဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို AI တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ကလေးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်း အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ထိ သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်အကိုင်ရဖို့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာတွေကိုပါ သင်ကြားပေးမယ်လို့လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ကလေးတွေကို ပညာရေးအကူအညီပေးဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရကို နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Amnesty International ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ထဲမှာပဲ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရကတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို တရားဝင် လက်ခံမထားပေမဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို စိစစ်ပြီး ပြန်လည်လက်ခံမယ်လို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်တချို့ လူကုန်ကူးခံရ သတင်းကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ရောကျ ရိုဟငျဂြာကလေးတှအေတှကျ ပညာရေးအစီအစဉျ စတငျမညျ
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ရောကျ သိနျးနဲ့ခြီတဲ့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျ ကလေးတှကေို ပညာသငျကွားခှငျ့ ပေးတော့မယျ့အကွောငျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့က ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ ရိုဟငျဂြာကလေးတှေ ပညာသငျခှငျ့ရစလေိုကွောငျးလညျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး A.K. Abdul Momen က AFP သတငျးဌာနကို ပွောဆိုခဲ့တာပါ။
၂၀၁၇ ခုနှဈထဲ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးမှာ ARSA ရိုဟငျဂြာအစှနျးရောကျအဖှဲ့ကို မွနျမာစဈတပျက လိုကျလံရှငျးလငျးတဲ့ စဈဆငျရေးတှအေတှငျး အိမျနီးခငျြး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံကို ထှကျပွေးသှားတဲ့ ရိုဟငျဂြာမှတျဆလငျတှထေဲမှာ ကလေးငယျ သနျးဝကျလောကျ ပါဝငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပွီး ဒီကလေးငယျတှထေဲက တသောငျးလောကျကို စမျးသပျအစီအစဉျအဖွဈ ကုလသမဂ်ဂ ကလေးငယျမြားရနျပုံငှအေဖှဲ့ UNICEF ကဖှငျ့လှဈပေးမယျ့ ကြောငျးတှမှော ပညာသငျကွားပေးသှားမှာပါ။
ရိုဟငျဂြာကလေးပညာရေး ကူညီဖို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ကို AI တိုကျတှနျးတဲ့သတငျးကို ဖတျရှုနိုငျပါပွီ။
ကလေးတှကေို မွနျမာနိုငျငံ သမိုငျးနဲ့ ယဉျကြေးမှုတှအေကွောငျး အသကျ ၁၄ နှဈအရှယျရောကျတဲ့အခြိနျထိ သငျကွားပေးမှာဖွဈပွီး၊ မွနျမာနိုငျငံကို ပွနျခှငျ့ရတဲ့အခြိနျမှာ အလုပျအကိုငျရဖို့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျး အတတျပညာတှကေိုပါ သငျကွားပေးမယျလို့လညျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးက ပွောပါတယျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ရောကျ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျ ကလေးတှကေို ပညာရေးအကူအညီပေးဖို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အစိုးရကို နိုငျငံတကာ လူ့အခှငျ့အရေး လှုပျရှားမှု အဖှဲ့တခုဖွဈတဲ့ Amnesty International ကလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ သီတငျးပတျထဲမှာပဲ တိုကျတှနျးထားပါတယျ။ မွနျမာအစိုးရကတော့ ရိုဟငျဂြာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို တရားဝငျ လကျခံမထားပမေဲ့ ဒုက်ခသညျတှကေို စိစဈပွီး ပွနျလညျလကျခံမယျလို့ ပွောဆိုထားပါတယျ။
ရိုဟငျဂြာကလေးငယျတခြို့ လူကုနျကူးခံရ သတငျးကို ဖတျရှုနိုငျပါပွီ။